Oviana Ianao No Niharan’ny Herisetra Ara-nofo Voalohany? Manohitra Ny Herisetra Antserasera Ny Vehivavy Breziliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2015 6:49 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, English, Português, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, Español
Sary avy amin'i Victor Teixeira/Facebook. Nahazoan-dalana ny sary.
Iharan'ny herisetra ara-nofo voalohany ny vehivavy iray ao Brezila eo amin'ny faha sivy taonany. Avy amin'ny asan'ny vondrona mpiandraiki-tserasera antsoina hoe ThinkOlga izany fikarohana mahagaga izany, izay nanangona tantara kely maherin'ny 80.000 mikasika ity lohahevitra ity tamin'ny fampiasana Twitter.
Nanomboka tamin'ny MasterChef Junior izany rehetra izany, avy amin'ny fandaharana malaza iray mpandeha mivantana momba ny nahandro fanaon'ny Tandrefana, mampiseho ireo mpifaninana eo anelanelan'ny sivy ka hatramin'ny 13 taona. Amin'ny fivezivezen'ny mpahandro mahay mifaninana amin'ny nahandro mandeha mivantana amin'ny fahitalavitra, namorona meme [sary pihana namboarina hihomehezana] vaovao ny mpijery voasarika mba hifaneraserana amin'ny fandaharana. Raha mampahery ny sasany, naneso ireo mpifaninana kosa ny fanehoan-kevitra hafa. Eo amin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao, manana ny toerany avokoa ny herisetra, ny fanilihana vehivavy, sy ny fametavetana ankizy, niteraka voka-dratsy tsy nampoizin'ny mpamokatra ny fandaharana ny MasterChef Junior
Hita fa mpahandro sakafo mahay indrindra sy tena ankafizin'ny mpijery i Valentina, 12, taona, iray amin'ireo mpifaninana. Saingy tsy maintsy niaritra ireo karazana fanehoan-kevitra mpanilika vehivavy sy mpanolan-jaza rehefa eo amin'ny fandaharana. “Miloko mavo mena ny volony lava ary manga ny masony. Raha nahazo fankatoavana aho, mety ho mpanolan-jaza ve aho?” hoy ny vakin'ny fanehoan-kevitra iray ao amin'ny Twitter. “Hanjary iray amin'ireo sekretera amin'ny sarimihetsika vetaveta i Valentina alohan'ny faha-14 taona” hoy ny fanehoan-kevitra hafa.
Miha-feno fanehoan-kevitra feno fankahalana ny tambajotra sosialy. Ity tranga manaitra ity, na izany aza, dia notoherin'ireo vondrom-behivavy tia mamorona, tsy misolelaka, tia fandaminana sy mavitrika ao amin'ny aterineto ihany koa.
Taitra tamin'ireo fanehoan-kevitra marobe mpanambany vehivavy mikasika ny MasterChef zandriny, ny tambajotram-behivavy bilaogera, mpiserasera Twitter sy Facebook dia nivondrona tao anatin'ny fifaneraserana iombonana ThinkOlga mba hifanentana amin'ny alalan'ny diezy #PrimerAsedio (fanohintohinana voalohany).
Iray amin'ireo mpanoratra ao amin'ny ThinkOlga i Juliana, nizara ny zavatra niainany tao amin'ny tranonkala:
We created the #primeiroassedio hashtag on Twitter. There, I, Juliana, shared my first experience with harassment at age 11 and other cases that occurred repeatedly during my childhood, preadolescence, and adolescence.
We invited our readers to do the same. It is not a simple, painless, or easy mission. Empowering yourself from your own story is important, so that the victim is recognized as a victim. It is not victimhood. It is the first and most important step towards change.
Namorona ny diezy #primeiroassedio tao amin'ny Twitter izahay. Nizara ny traikefako voalohany tamin'ny fanaovana antsojay ahy teo amin'ny faha-11 taonako sy ireo tranga hafa nitranga imbetsaka nandritra ny fahazazako, ny fidirana amin'ny fahatanorana sy ny fahatanorana izaho Juliana tao.
Manasa ireo mpamaky izahay mba hanao tahaka izany ihany koa. Andraikitra tsy mora, maharary ary tsy tsotra izany. Zava-dehibe ny fankaherezanao ny tenanao amin'ny tantaranao manokana, ka fantatra ho niharam-boina tokoa ny niharam-boina. Tsy resaka fanandratana ny niharam-boina ity. Dingana voalohany sy zava-dehibe indrindra mankany amin'ny fiovana izany.
Valinteny maherin'ny 82.000 (sioka sy sioka naverina) no nivoaka tao amin'ny Twitter tamin'ny 25 Oktobra Niresaka momba ny ampahany amin'ireo tantara 3.111 nozaraina tao amin'ny Twitter ny mpikatroka ary hita fa miseho eo amin'ny faha 9,7 taona eo ny zava-nianana voalohany nahazoana antsojay.
Ity ambany ity ny saontinany kely:
Tamin'ny faha-15 taonako, nanaraka ahy tamin'ny fiarany ny mpampianatra taranja tantara ahy ary “nanasa” ahy hiditra ao anatiny. Rehefa tsy niraharaha azy aho dia tsy nifindra kilasy.
@moharamv: 7 taona aho tamin'ny antsojay voalohany niainako. Nanapa-kevitra hanatsofoka ny tanany ao anaty akanjoko ny rahalahin'ny dadabeako. Naharitra fotoana ela ny nieritreretako fa toy izany no fanaovan'ny zokiolona veloma.
@amandassfair, 9 taona. Nisy lehilahy iray niezaka haka ahy an-keriny teo anoloan'ny trano fahinin'ny havanay. Mandraka androany, tsy mandeha eny amin'ny lalana nitrangan'izany intsony aho.
Raha nivoaka sy nozaraina tao amin'ny Twitter, Facebook, ary bilaogy ny tantara, nipoitra indray ihany koa ny resabe. Nanamarina izy ireo fa noho ny endriky ny vehivavy no mahatonga azy ho voaolana, nampiasa ny endrika ivelan'ny vehivavy mba hanafika azy ireo (“matavy”, “ratsy tarehy”, “manao akanjo toy ny vehivavy janga”), ary nitsipaka ireo fijoroana ho vavolombelona ho lainga.
Ankoatra ny fanafihana, niresaka momba ny fanehoan-kevitra manohitra ezahin'izy ireo naparitaka i Louise Bello ao amin'ny ThinkOlga:
Tsy mampino, mahery vaika, ary manintona ny mahita ny hery ananantsika, miaraka hiampanga ity karazana herisetra ity sy ny fomba hanomezany herim-po ho antsika mba hizara ny tantarantsika fotsiny. Ny fikasanay dia ny hanome hery fotsiny ho an'ny vehivavy. Izy ireo no mendrika fandinihana, toerana, sy feo amin'ity hetsika manontolo ity. Niaritra fanafihana ny fanentanana, eny, izay ampoizina rehefa miampanga ny fanjakazakan-dehilahy ao amin'ny aterineto ny vehivavy. Saingy tsy manaisotra ny fifantohana na hampihena ny herin'ny fanentanana izany.
Herisetra tena izy ihany koa ny herisetra antserasera
Afaka manampy ireo mpiserasera handinika ny toetry ny herisetra ao amin'ny sehatra virtoaly sy eny an-dalambe ny fanadihadiana ireo karazana fampiasana aterineto miaraka amin'ny votoaty novokarin'ny fitaovam-pifandraisana nentim-paharazana kokoa tahaka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo.
Namoaka feo masiaka marobe ny tambajotra sosialy. Mihoatra noho ny tany aloha, fotoana handinihana momba ny fahavoazana tena misy ateraky ny fanafihana antserasera sy ny herisetra izao.
Ao Brezila, voalaza ao amin'ny andininy faha-213 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Breziliana ny sazy amin'ny fanaovana an-keriny. Araka ny volazan'ny andininy faha-241-D momba ny ankizy sy ny tanora, voasazy herintaona hatramin'ny telo taona an-tranomaizina ary mandoa onitra ny misarika, manorisory, mandrisika na manery ankizy, amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana misy, miaraka amin'ny tanjona hanatanterahana fihetsika mamoha fady amin'izy ireo.
Na dia maro aza ireo mpanafika namafa ny kaonty Twitter-n'izy ireo, niparitaka sy azo atao porofo ireo pikantsary misy ny fanehoan-kevitra.
Araka ny voalazan'ny Satan'ny Zon'ny Olom-pirenena Breziliana amin'ny Aterineto, fantatra ihany koa hoe “Marco Civil da Internet”, tsy tompon'andraikitra na tokony hanana fahalalana mialoha mikasika izay avoakan'ny mpiserasera ny mpanelanelana. Saingy raha sy rehefa ampahafantarina ireo karazana fanararaotana izy ireo, dia tsy maintsy manaisotra izany votoaty izany, raha tsy izany tompon'andraikitra ihany koa amin'ny fahavoazana aterak'izany.
Raha nampahafantarin'ny Mpampanoa lalàna momba ny fanararaotana ny Twitter, dia mety takiana aminy ny hamoahana ny mombamomba ny nahavanon-doza. Ao Brezila, tonga hatrany amin'ny fandraiketam-panjakana mihitsy izany.
“Amin'izany vaovao izany, afaka mitory azy ireo amin'ny ady madio noho ny fahavoazana sy ny fahaverezana ihany koa ny ray aman-dreny,” hoy i Ricardo de Moraes Cabezon, manam-pahaizana momba ny lalàna mifehy ny ankizy sy ny tanora tamin'ny vohikalam-baovao Uol.
Nanampy nampitombo ny resaka momba ny herisetra an-tserasera toy ny mifandray mivantana amin'ny herisetra eo amin'ny sehatra ara-batana ny fanentanana. Zava-dehibe izany mba hanaraha-maso ireo voka-dratsin'ny herisetra antserasera mihatra amin'ny vehivavy sy ireo vondrona marefo hafa toy ny fikambanana LGBTIQ, zaza tsy ampy taona, sy ny olona manana fahasembanana.
Tao amin'ny fampahalalam-baovao, ny fanevatevana sy ny endrika habibiana hafa dia mety hamafisina amin'ny ambaratonga tsy zaka ho an'ny niharam-boina amin'ny fiaretana izany fanararaotana izany. Raha afaka manolo-tena hampiasa ireo sehatra anaty aterineto am-pahamendrehana sy amim-panajana isika, afaka hampihena ny herisetra sy hamorona fiarahamonina mahazaka kokoa isika.